दोषी पत्ता नलाग्दा सबैभन्दा बढी म असन्तुष्ट छु : गृहमन्त्री « Janaboli
दोषी पत्ता नलाग्दा सबैभन्दा बढी म असन्तुष्ट छु : गृहमन्त्री
काठमाडौ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्याका दोषी पत्ता नलाग्दा सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट आफू रहेको बताउनुभएको छ । निर्मलाका आमा र बुबासहितको प्रतिनिधिमण्डललाई आज गृहमन्त्रालयमा भेट्दै उहाँले भन्नुभयो, “दोषीलाई कठघरामा ल्याउन नसक्दा जति पीडा गृहमन्त्रीलाई हुन्छ, त्यति अरुलाई हुँदैन होला ।” निर्मलाको हत्यारा नजीक अनुसन्धान पुगिसकेको भन्दै उहाँले दोषीलाई कठघरामा ल्याउन प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “कञ्चनपुर घटनामा हामीले शुरु देखिनै ध्यान दिएका हौँ । घटनालगत्तै स्थानीय प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियौँ, त्यसपछि केन्द्रबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को टोली पठायौँ, त्यसले पनि नभएपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियो । समितिबाहेक पनि छुट्टै ढंगले थप अनुसन्धान भईरहेको छ ।” सो घटनामा जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिबाट भएका लापरबाहीलाई छुट नदिइने गृहमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । दोषी छिटो पत्ता नलाग्दा परिवारलाई चिन्ता हुनु स्वभाविक भएको भन्दै गृहमन्त्रीले दोषी पत्ता लगाउन परिवारको समेत साथ लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
परिवारमा सबैंजना बिरामी भएपछि उपचार र परिवार चलाउँन सफारी चलाउदै १७ बर्षिया किशोरी !
उर्लाबारी । भगवान सबैंको हुन्छ भन्छन तर भगवानले कहिँलेकाँही सबैंलाई हेर्न सक्दैंनन । मोरङको उर्लाबारी
ग्रिनकार्डका लागि नक्कली बिहे गर्ने नेपाली युवा अमेरिकी जेलमा !
काठमाडौं । अहिले नेपालमा एउटा नयाँ फेशन चलेको छ । विकसित देशहरुमा जानको लागि नक्कली
सफलताको कथा,बाख्रा पालेर नुवाकोटका अमृत कमाउँछन वर्षमा ‘सवा करोड’ !
विदुर । अहिले नेपालमा बेरोजगारी गरिबीजस्ता कुराहरुले सिमा नाघेको छ । यो बिचमा नेपालमा पनि
भारतीय दादागिरी विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भयो विप्लव माओवादी ! [काँडेतार बोकेर सीमानामा ]
चितवन । नेपालभित्र भारतीय दादागिरीलाई कसैंले नर्कान सक्दैंन । पछिल्ला दिनहरुमा भारतले नेपालको भुभाग कब्जा